मिस वर्ल्डमा पहिरिएर नेपाली पहिरन, सुविनले जित्नेछिन् लाखौँ नेपालीको मन ! « Mazzako Online
मिस वर्ल्डमा पहिरिएर नेपाली पहिरन, सुविनले जित्नेछिन् लाखौँ नेपालीको मन !
लण्डनमा हुन लागेको मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा मिस नेपाल सुविन लिम्बुले नेपाली पहिरन पहिरिने भएकी छिन् । राजधानीमा एक कार्यक्रमका विच सुविनलाई नेपाली राष्ट्रिय पोशाक हस्तातन्तरण गरियो जँहा उनले यस्तो प्रतिवद्धता दिएकी हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै मिस नेपाल सुविन लिम्बुले आफु मिस बल्र्डको ताज जितेरै ल्याउने दाबी समेत गरिन । आफु पहिलो पटक मिस वल्र्डमा सहभागी हुन लागेको बताउदैं सुविनले मिस वल्र्डमा सहभागी हुन पाउँदा आफु निकै खुसी भएको पनि उनले बताएकी छिन् । उनलाई उक्त कार्यक्रममा ढाकाको सारी,द हाईल्याण्ड आर्टले डिजाईन गरेको सारी लगायतका नेपाली पोशाक लगायतका पोशाक हस्तान्तरण गरिएको थियो ।